उड्नै लागेको बिमानको पखेटामा युवक चढेपछि विमानस्थलमा मच्चियो भागदौड भिडियो भाइरल ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)….. – SUDUR MEDIA
December 16, 2020 December 19, 2020 AdminLeaveaComment on उड्नै लागेको बिमानको पखेटामा युवक चढेपछि विमानस्थलमा मच्चियो भागदौड भिडियो भाइरल ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)…..
काठमाडौँ । उड्न लागेको विमानका यात्रु सिटमा हुन्छन् । तर एक युवक भने , उड्न लागेको बिमानको पखेटामा भेटिएपछि यो भिडियो अहिले भाइरल बनेको छ । समाचार हो लास भेगसदेखि पोर्टल्याण्डको यात्रामा निस्किएको १३६७ फ्लाइट म्याकक्यारन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान भर्ने तयारी गरिरहेको विमानको । विमानले उडान भर्नै लाग्दा पाइलटले ति ब्यक्तिलाई देखे ।
लास भेगसको विमानस्थलमा अलास्का एयरलाइन्सको विमानको पखेटामा बस्ने ति युवकलाई समातेर अनुसनधान अगाडी बढाइएको छ । बोइङ ७३७ को विङ्गलेट ९विमानको पुछारमा माथितिर चुच्चो परेको उठेको भाग० चढ्नका लागि उनले आफ्नो जुत्ता र मोजा फुकाले लगत्तै सुरक्षाकर्मीले उनले नियन्त्रणमा लिन सफल भएको भिडियोमा देख्न सकिन्छ ।
प्रहरी अधिकारी पुगेपछि ती व्यक्ति विङ्लेटबाट चिप्लिँदै तल झर्ने कोसिस गरेँ र भुइँमा पछारिएको भिडियो भाइरल बनेको छ । अधिकारीले उनलाई हिरासतमा लिएर उनको स्वास्थ्योपचारका लागि पठाएको बताइन्छ । थप हेर्नुहोस् भिडियोमाः